HALATRA FINDAY Lehilahy iray no tratra teny 67 ha
Lehilahy iray 44 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP7 eny 67HA ny alakamisy teo noho ny resaka halatra finday.
Ny talata 25 febroary teo dia nametraka fitoriana tao amin’ny CSP7 67HA ny rangahy iray nilaza ny fahaverezan’ny findainy teny Coum 67 ha. Niantsena teny an-toerana mantsy ity farany ka nametraka ny fiarany teny amin’ny sisin-dalana. Rehefa niverina niditra ao anaty fiara ny mpamily vao gaga raha nahatsikaritra fa tsy ao intsony ny sakaosy misy ny finday vaovao tsy nampiasaina miisa telo ary tsy mbola misy puce ao anatiny. Ireo finday ireo izay mitentina 3.200.000Ar. Nihetsika avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ka taorian’ny fikarohana nataony dia tra-tehaka teny amin’ny paositra 67ha ny iray tamin’ireo mpangalatra finday ireo ny 27 febroary teo tokony ho tamin’ny 9 ora maraina ary fantatra fa miisa 3 ireo olon-dratsy no nanao izany. Efa mpamerin-keloka ity lehilahy voasambotra ity ary efa in-droa nigadra teny Antanimora noho ny resaka halatra hatrany. Efa naiditra am-ponja vonjimaika moa ny tenany.